ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 28, 2010 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 31, 2020 Douglas Karr
ဒီနေ့ညနေမှာငါဖောက်သည်တစ်ယောက်နဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသွားအလာတိုးမြှင့်ရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်နည်းကိုလုပ်နေတယ်။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု၊ meta ဖော်ပြချက်၊ ခေါင်းစဉ်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာကိုယ်နှိုက်ကသေးငယ်တဲ့ညှိနှိုင်းမှုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအံ့သြစရာပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကရေးသားခဲ့သောဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီး၊ အနည်းငယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရလဒ်ရလဒ်များကို Authority Labs မှစစ်ဆေးပါမည်။
အတော်များများကဒီဇိုင်နာများနှင့် web developer များကလျှော့ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization ၏တန်ဖိုး။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကသူတို့ဟာ SEO ပညာရှင်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ခတ်နေတာပဲ။ Derek Powazek မကြာသေးမီကရေးသားခဲ့သည်:
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏တရားဝင်ပုံစံမဟုတ်ပါ။ ဦး နှောက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ရှိသူများက၎င်းကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အား SEO ကိုတောင်းခံလျှင်၊
Do. မဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်ပါ။ သူတို့ကို
Ouch ။ ငါရောက်ပြီ SEO ကျွမ်းကျင်သူများအပေါ်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ အဖြစ်ကောင်းစွာ ... ပင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှစကားပြော SEO ပညာရှင်တစ်ယောက်လုပ်နိုင်တာတွေအများကြီး သင်သည်ကိုယ်အဘို့အလိုငှါလုပ်ရသောအခွင့်ရှိ၏။ သင့်တွင်ဗဟုသုတမရှိသောသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များမရှိလျှင်သို့မဟုတ်အပြိုင်အဆိုင်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွင်သင် SEO ကျွမ်းကျင်သူသည်ခြားနားချက်အားလုံးကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ငါထပ်ပြီးပြောရရင် Derek ရဲ့ post မှာကောင်းမွန်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေရှိတယ်။
ကြီးမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်ပါ ဒါကိုလူတွေကိုပြောပြပါ။ ထပ်လုပ်ပါ ဒါပဲ။ သင်ယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ အဲဒါကိုလှပပြီးယုံကြည်မှုရှိစေပါ။ အသေးစိတ်တိုင်းချွေး။
ဒါကြောင့်အသွားအလာမရရှိလျှင်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းကအလုံအလောက်မကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ထပ်ကြိုးစားပါ။
ဖြစ်နိုင်စရာ။ ဖြစ်နိုင်စရာ? ဖြစ်နိုင်စရာ?!
Derek ၏အတွေးအခေါ်သည်သူ၏ဖောက်သည်များကိုကြီးမားသောအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။ ပြproblemနာမှာ SEO ပညာရှင်များမဟုတ်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်သည်။ သင်၏ SEO ကျွမ်းကျင်သူကိုယုံပါ၊ သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုမယုံပါနှင့်! Google ၏အားနည်းချက်များအတွက် SEO ပညာရှင်များကိုအပြစ်မတင်ပါနှင့်။
ဂူးဂဲလ်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သော့ချက်စာလုံးများကို ကျော်လွန်၍ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းသည်၎င်းကိုအထောက်အကူပြုသည် ဟုတ်မှန်ရေး... ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်လာခဲ့သည် ကျော်ကြားမှု အင်ဂျင်…နှင့် အကြီးအကျယ်သော့ချက်စာလုံးများအပေါ်အခြေခံပြီးဆက်လက်.
Derek သည်မှားသည်။ robots.txtpings၊ ဇယားများစာမျက်နှာအဆင့်ဆင့်၊ သော့ချက်စာလုံးအသုံးပြုခြင်း။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသောကြောင့်သုံးစွဲသူများအားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကဤနည်းကိုရှင်းပြသည် -
SEO သည်တရားဝင်မဟုတ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံမဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆိုခြင်းသည်မူလ4P's …ထုတ်ကုန်၊ စျေးနှုန်း၊ မြှင့်တင်ရေးနှင့် နေရာချထားရေး။ နေရာချထားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှု၏အခြေခံဖြစ်သည်။ အင်တာနက်စာမျက်နှာတိုင်း၏ ၉၀% ကျော်တွင်ရှာဖွေသူတစ် ဦး ပါ ၀ င်သည်။ သင့်ရဲ့ client ကိုသက်ဆိုင်ရာရှာဖွေရေးရလဒ်အပေါ်မတွေ့ရှိလျှင်မင်းအလုပ်မလုပ်ဘူး ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှုကိုသင်မလိုချင်ပါ။ မျှော်လင့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ …ငါပြောရဲဝံ့…ချွေး။
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ web site ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မဟုတ် ရှာဖွေရန်အတွက်၎င်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော menu တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်သင်ဖွင့်သည့်နေရာကိုဂရုမစိုက်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မသိဘဲမဟုတ်ဘဲတာဝန်မဲ့မှုလည်းဖြစ်သည်။
Tags: Derek powazekမုန်းseoseo မုန်း
ဇန်နဝါရီလ 28 ရက် 2010 ခုနှစ် ညနေ 11 နာရီ 17 မိနစ်